Kuwani waa wararka ku saabsan beta beta afaraad ee iOS 15 iyo iPadOS 15 | Wararka IPhone
Kuwani waa wararka beta-afraad ee iOS 15 iyo iPadOS 15
Angel Gonzalez | 28/07/2021 10:48 | macruufka 15, Noticias
Warku wuxuu ka dhacayaa betas loogu talagalay soosaarayaasha nidaamyada cusub ee Apple ku shaqeeya. Dhowr saacadood ka hor ayaa beta afaraad ee macruufka 15, iPadOS 15 iyo nidaamyada intiisa kale. Inkasta oo qoraalada rasmiga ah ee sii deynta cusubi ay diirada saareyso hagaajinta nidaamka iyo hagaajinta cilladaha ay soo sheegeen horumariyeyaasha Sidoo kale waxaa ka mid ah wararkii hore ee betas. Arrintan beta 4 isbeddelo badan ayaa lagu soo bandhigaa habeynta xagjirnimada ee Safari, aalado cusub iyo waxyaabo kale ayaa lagu soo bandhigaa barnaamijyada u gaarka ah sida asalka cusub ee dhaqdhaqaaqa ee barnaamijka Cimilada. Waxaan kuu sheegeynaa warka hoose.
Maxaa ku cusub beta 4 ee iOS 15 iyo iPadOS 15 horumariyayaal
The novelties ugu weyn ee la xiriira xallinta khaladaadka ay daabacaan horumariyeyaasha ayaa laga heli karaa Bogga rasmiga ah ee Apple. Qoraalka waxaan ku arki karnaa qaladaadka ay sameysay oo ay amartay API ama qaabdhismeedka ay saameysay. Si kastaba ha noqotee, isticmaaleyaasha aan wax badan ka aqoonin koodhka ama cilladaha nidaamka ayaa diiradda saaraya ee sheeko-lahaanshaha iyo muuqaalka muuqda ee beta-kan afraad. Waxaan falanqeyneynaa kuwa soo muuqanaya saacadaha ugu dambeeya. In kasta oo ay iska cadahay in warar isa soo taraya ay soo baxayaan waqti kadib. Waa nooc weyn oo ay ku jiraan isbeddelada dhammaan qaybaha nidaamka.
Apple wuxuu sii wadaa inuu Safari uga beddelo iPadOS 15.
IPadOS 15 beta 4, tabkii tabka ahaa wuu soo laabtay, waana hada halkii loogu talagalay.
Hadaad rabto, * ikhtiyaar ahaan * waad karti uyeelan kartaa barta tabka cusub ee istiraatiijiga ah ee Settings.
Wicitaan wacan. 👍 pic.twitter.com/26GNfeJSyE
Waxaan ku bilaabaynaa iPadOS 15 kaas oo ku soo daray sifooyin cusub Safari ka dib isbedelkeedii xagjirka ahaa ee naqshadeynta iyo fikradda ee betaskii ugu dambeeyay. In beta 4 bar tab gooni ah ayaa lagu daray kaas oo isticmaalaha uu ka arki karo URL-ka ugu weyn xagga sare iyo xagga hoose, hoosta URL-ka, tabs-ka. Waxay u egtahay inbadan oo Safari ah oo aan ku arki karno macOS Monterey. Si kastaba ha noqotee, Apple waxay u diyaarisay isticmaaleha ku jira Settings suurtagalnimada ku noqo qaabkii hore ee Safari beddelashada 'isafgarad' ama 'gooni ah' oo tixraacaya baarka maraakiibta iyo tabs.
Safari on iPhone ayaa waliba isbadal kuyimid beta 4. Badhanka saamiga waxaa laga badalay goob ilaa meel wuxuuna ka muuqdaa tabka tabka, badhanka cusbooneysiinta waxaa lagu darayaa URL-ka agtiisa sidaas oo kale waxaa sidoo kale lagu daray animation yareynaya tabta bar markaad booqaneyso bogga internetka. Ugu dambeyntiina, markii barta URL-ka la riixo dhowr ilbiriqsi, ikhtiyaarka ah 'Muuji calaamadaha calaamadaha' ayaa muuqda.
Apple wuxuu daabacaa beta-kii afaraad ee iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 iyo macOS Monterey
In waqtiga app ee beta 4 ee macruufka 15, ku dar taariikh nololeed cusub sida midka aan ku arki karno sawirka madaxa u ah maqaalka. Natiijada ka soo jeeda dhaqameedyadan ayaa ah mid nadiif ah iyada oo la tixgelinayo isbeddelka isbeddelka ee iOS 15 ay ku soo martay qaar ka mid ah barnaamijyada hooyo sida tan.
Sidoo kale waxaa ka mid ah suurtagalnimada wadaagno Qaabka Urursiga oo aan kula kulanno shaqsiyaad xiriir la leh. Dhinaca kale, naqshadaha qaar ee ka maqnaa in laga saxo qaabka cusub ee iOS 15 ayaa wax laga beddelay, sida qaybta 'Account' ee app Store. Natiijada ugu dambeysa waxay noqotay wareega miisaska u oggolaanaya iswaafajinta dhammaan nidaamka nidaamka.
Ficil cusub oo loogu magac daray 'Ku noqoshada shaashadda guriga' ayaa lagu daray barnaamijka Tilmaamaha. Kaasoo aad ku ciyaari karto tuuryooyinka kala duwan ee horay loo abuuray ama kuwa la abuuri doono hadda kadib. Ugu dambeyntiina, waa la soo bandhigay cabir cusub oo loogu talagalay barnaamijka 'Podcasts' on iPadOS 15.
Widgets iyo App Library-ka ku yaal iPadku aad ayey u fiican yihiin. Iyo haysashada shaashad kasta oo beddelka shaashadda ku saleysan Focus waa mid aad waxtar u leh.
Ma doonayo bogga ciyaarta inta lagu jiro shaqada, mana doonayo wararka marka aan shaqeynin. Halkaan waxaa lagu tijaabinayaa cabiraada. pic.twitter.com/jLM5tKahSG
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Kuwani waa wararka beta-afraad ee iOS 15 iyo iPadOS 15
DuckDuckGo wuxuu soo bandhigayaa aalad u gaar ah si looga gudbo raadraacayaasha emaylka